"ဆော့ဖအမှား" - UNEXPLAINED ကွန်ပျူတာပြဿနာများကို - ဆောင်းပါးများ - 2019
ငါကြိုးဖတ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို Komsomol အမှန်တရားများ၏အဆင့်မှာသင်တန်း၏ဆောင်းပါး, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က, စတီဖင် Dzhakisa (စတီဖင် Jakisa) မိမိကွန်ပျူတာနှင့်လေးနက်သောပြဿနာများရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအ-လူတစ်ဦးသေနတ်သမား, မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ရာအရပ်ကိုကြာသည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု - သူ Battlefield3ကိုထားသောအခါသူတို့ကစတင်ခဲ့သည်။ တိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ပြဿနာတွေဂိမ်းထဲမှာမသာခဲ့ကြပေမယ့်မိမိအဘရောက်ဇာကိုတိုင်းမိနစ် 30 သို့မဟုတ်ဒီတော့ "ချွတ်" ။ ရလဒ်အဖြစ်သူတောင်မှသင့်ရဲ့ PC မှာမဆိုဆော့ဖျဝဲကို install နိုင်ဘူး။
ဒီတော့သိပ်ဒါစတီဖင်ကြောင်း - အလုပ်အကိုင်ကပရိုဂရမ်မာများနှင့်ကအတော်လေးပု technique ကိုလူကိုလညျးတတျကြှမျးဖြစ်ပါတယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး "ဖမ်း" ဟုဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အချို့သောအလေးအနက် software ကို bug တွေကိုသတ်မှတ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြဿနာကိုသူကပဲကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးအပေါ်တစ်ဦးစာတမ်းရေးသားခဲ့သည်သူကိုသူ့မိတ်ဆွေဆရာယောဟနျ Stefanovich (Ioan Stevanovici), သှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Dzhakisa အတွက်မကောင်းတဲ့မှတ်ဉာဏ် chip ကို - အကျဉ်းချုပ်ရောဂါပြီးနောက်စတီဖင်နှင့်ယောဟန်ပြဿနာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးခြောက်လဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ကတည်းကပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှေ့တော်၌မိမိမိတ်ဆွေတစ်မှတ်ဥာဏ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အထူးစမ်းသပ် run ဖို့မဖျောင်းဖျသည်တိုင်အောင်, စတီဖင်ကိရိယာအတွက်ပြဿနာများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိပေ။ စတီဖင်ကအတော်လေးပုံမှန်မဟုတ်သောခဲ့သည်။ သူသညျမိမိပြောခဲ့သကဲ့သို့: "ကကွန်ပျူတာများအကြောင်းကိုဘာမှမသိသူတစ်ဦးနှင့်အတူလမ်းပေါ်မှာတစ်စုံတစ်ဦးမှဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ဖြစ်ကောင်းဟာသောင်မတင်မှာဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်။ "
Dzhakisa ပုံမှန်လည်ပတ်က၎င်း၏ကွန်ပျူတာပြဿနာမှတ်ဉာဏ် module တစ်ခုဆွဲငင်ပြီးနောက်။
ကွန်ပျူတာဖြိုဖျက်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်သူတို့ပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပြဿနာများယုံကြည်ပါတယ်။ သူတို့ ပို. မကြာခဏလူအများစုထင်ထက်ပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်သို့သော်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များဟာ့ဒ်ဝဲအောင်မြင်မှုများပိုမိုအာရုံစိုက်နှင့်ပြဿနာနိဂုံးလာရန်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လာကြပါပြီ။
Windows 8 မရဏ၏အပြာရောင်ဖန်သားပြင်
ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူစျေးကွက်ပေါ်သူတို့ကိုလွှတ်မတိုင်မီ၎င်းတို့၏ chip ကိုစမ်းသပ်ဖို့အချို့သောအလေးအနက်အလုပ်ဖြုန်း, ဒါပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးဝင်သောပြည်နယ်ချစ်ပ်အတွင်းရှိပေးရန်ခက်ခဲကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းပြောဆိုလိုကြပါဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှောင်းပိုင်း 70-ies ကတည်းကချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူဟာ့ဒ်ဝဲပြဿနာများ၏နံပါတ် microprocessor များအတွင်းအခြေအနေကို-bits အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်လူသိများသည်။ စစ္၏အရွယ်အစားအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူသူတို့ကိုစွဲချက်တင်အမှုန်များ၏အမူအကျင့်နည်းသောကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်လာရသည်။ သူတို့က software ကိုမှဆက်စပ်နေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ထုတ်လုပ်သူ, "ပျော့အမှား" ဤအမှားများကိုခေါ်ပါ။
သို့သော်ဤအပျော့အမှားများကို - သာပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းနေသောခေါင်းစဉ်: ရှုပ်ထွေးပြီးကြီးမားတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုလေ့လာနေသုတေသီများအများအပြားကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ကွန်ပျူတာကိရိယာများကိုရိုးရှင်းစွာအတိတ်ငါးနှစ်ကျိုးပဲ့သောကောက်ချက်မှလာကြပြီ။ အပူသို့မဟုတ်ကုန်ထုတ်ချို့ယွင်းချက်အီလက်ထရွန်ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ရည်ရွယ် channel ကိုစစ္သို့မဟုတ်ချစ်ပ်အကြားလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းခွင့်ပြု, အချိန်ကျော်ပျက်ကွက်လတံ့သောအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
စွမ်းအင် - သားစဉ်မြေးဆက်လာမယ့်ကွန်ပျူတာချစ်ပ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဲဒီချို့ယွင်းချက်များနှင့်ထိုပြဿနာများ၏အဓိကရှုထောင့်တစ်ဦးအကြောင်းကိုအလေးအနက်စိုးရိမ်ကြောင်းပြသပါ။ ကွန်ပျူတာများရဲ့နောက်မျိုးဆက်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမျှသူတို့ပိုပိုပြီးချစ်ပ်နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့သေးငယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်လာရသည်။ နှင့်ဤသေးငယ်သောစစ္၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပိုမိုစွမ်းအင်သူတို့ကိုအတွင်း-bits ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုအခြေခံရူပဗေဒကနေအဓိကအားထား။ အဖြစ်မကြာမီ chip ကိုထုတ်လုပ်သူငယ်များနှင့်သေးငယ်လိုင်းများပေါ်အီလက်ထရွန်တဆင့်ပို့ခြင်းအဖြစ်, အီလက်ထရွန်ရိုးရှင်းစွာအထဲကခေါက်နေကြသည်။ အဆိုပါလျော့နည်းကူးမှုလိုင်းများ, ပိုအီလက်ထရွန် "ထွက်ပေါက်ကြား" နိုင်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သည့်စွမ်းအင်၏ သာ. ပမာဏကို။ ဤပြဿနာကို Intel ကကဖြေရှင်းမှစွမ်းအင်နှင့်အခြားအစိုးရအေဂျင်စီများကအမေရိကန်ဦးစီးဌာနနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတျမှာ Intel ကဒီဆယ်စုနှစ်၏အဆုံးအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်သူတို့၏အမျိုးအထက်ပိုမို 1000 ကြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်လတံ့သော, ချစ်ပ်များထုတ်လုပ်များအတွက် 5-nm ဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာသုံးစွဲဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့သောချစ်ပ်ကိုလည်းစွမ်းအင်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပမာဏကိုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုထင်ရသည်။
သငျသညျဤမေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးလျှင် "ဒါပေမဲ့ - - မာကု Seager (မာကု Seager), အက Intel အတွက် high-performance ကိုကွန်ပျူတာဂေဟစနစ်အဘို့အအကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ် - က" သင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်ကြပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤချစ်ပ်အောင်ဘယ်လိုသိ " ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အထက်။ "
အမည်မသိဧရိယာ - ထိုသို့သောစတီဖင် Dzhakisa ကမ္ဘာကြီးထိုကဲ့သို့သောအမှားများအဖြစ်သာမန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်။ chip ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့ထုတ်ကုန်ကိုမကြာခဏလျှို့ဝှက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုနှစ်သက်, နေတာတွေလည်းဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုလိုကြပါဘူး။